Pazuva rakafanana nanhasi, makore 75 apfuura Miguel Hernández akafa | Zvazvino Zvinyorwa
Zuva rakadai nhasi, 28th Kurume, Makore 75 apfuura Miguel Hernández akafa, chimwe chezvinhu zvakakosha mumabhuku echiSpanish. Akazvarwa muOrihuela muna 1910, munyori uyu ndewechizvarwa chakatevera chizvarwa chakakurumbira chemakumi maviri nenomwe, kunyange hazvo achiwanzo kuverengerwa muboka iri nekuda kwekudyidzana nevamwe vadetembi uye nekuda kwehukama hwehukama hwaaive nahwo nevamwe vavo.
1 Kuva Chizvarwa che36
2 Hupenyu nebasa raMiguel Hernández
3 Quotes uye zvirevo naMiguel Hernández
Kuva Chizvarwa che36
Kunyangwe zvisina zvakawanda zvataurwa nezvake, pakanga paine kufona Chizvarwa che36. Yakagadzirwa kunyanya nevanyori vakazvarwa mukati megore ra1910, sezvazvaive zvakaitika kuna Miguel Hernández, uye vaive vadetembi vakaumbwa panguva yeRepublic.
Chimwe chinhu chakafanana mune vese ndechekuti ivo vakapinda muchimiro chekusimudza, chakamisikidzwa kupfuura zvese nemufananidzo waPablo Neruda, uyo akafanotangira ivo kutanga kuma 1930. Pamwe naMiguel Hernández, chizvarwa ichi chinosanganisira vadetembi vakaita saJuan Gil-Albert, Luis Rosales, Juan Panero, Felipe Vivanco, Jose Antonio Muñoz Rojas, Leopoldo Panero kana Carmen Conde.
Chimwe chezvikonzero nei zvave zvichinetsa kucherechedza ichi chizvarwa chekunyora iwo mutsauko wakasiyana kwazvo pakati pevanyori vayo maererano nenzira yekuverenga.
Mumabasa ake ekutanga ezvinyorwa akange akanganiswa nekuvapo kwaGóngora, aripo chaizvo muGeneration ye27 uye zvakare mune rake rekutanga basa, "Nyanzvi mumwedzi" (1933). Makore gare gare iye aizoburitsa "Mheni isingaperi" (1936), kwaakashandisa echinyakare metric zvivakwa, senge sonnet kana yakasungwa katatu, iyo metric hwaro hweakakurumbira runyorwa inozivikanwa se «Elegy kuRamón Sijé». Iri mune iri basa mune iyo "Rehumanization" yenhetembo yechi27, yatakambotaura nezvayo: rudo semusoro wedingindira remavhesi ake.
Mabasa anozivikanwa aive "Mhepo yevanhu" (1937) uye "El hombre stalking" (1939), kwaanotaura nezvekusuwa kwakaunzwa neSpanish Civil War. Bhuku rake rekupedzisira raive "Bhuku renziyo uye mabhaladhi ekusavapo" (1938-1940), inosanganisira nziyo zhinji dzaive yakanyorwa nemunyori kubva mutirongo rake chairo, kwaakafira muAlicante muna 1942.
Quotes uye zvirevo naMiguel Hernández
«Yakapendwa, kwete isina chinhu: yakapendwa ndiyo imba yangu ruvara rwezvido zvikuru uye nhamo».
«Kunyangwe muviri wangu une rudo uri pasi penyika, nyora pasi, izvo zvandichakunyorera».
«Usatarise nepahwindo, hapana chinhu mumba muno. Tarisa mumweya wangu ».
"Seka zvekuti mweya wangu kuti unzwe warova nzvimbo."
"Zvidhakwa zvakawanda hupenyu uye chinwiwa chimwe rufu."
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Makore 75 apfuura Miguel Hernández akafa